Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: December 30, 2017 00: 10 Awekho amazwana
Ushukela nosawoti kungahlanganiswa ndawonye, ​​kodwa izintuthwane zenqaba usawoti futhi zisuse ushukela kuphela okungukuthi khetha abantu abalungile empilweni futhi wenze impilo yakho ibe ngcono futhi ibushelelezi.
- Uma uhluleka ukuqaphela amaphupho akho, shintsha kwakho indlela, hhayi uNkulunkulu wakho, kodwa khumbula ukuthi izihlahla zishintsha amaqabunga awo, hhayi izimpande zawo.
- Awusoze wafika lapho uya khona uma ume futhi ujikijela amatshe kuyo yonke inja ekhonkothayo, kunjalo yisho i abazondayo bazokubona uhamba emanzini bese usho ngoba awukwazi ibhukuda futhi ngisho uma udansa emanzini, izitha zakho zizokumangalela ngokuthi uvusa uthuli.
- Yenza isifiso sakho sokuphila impilo ethule, uqaphele ibhizinisi lakho futhi uzisebenzele wena futhi ukhumbule, "ungalokothi ulwe nengulube" ngoba nobabili nizongcola, kepha ingulube l 'bazokwazisa.
I-Russia iphumelele ukuvuselela ukuxhumana ne-satellite yokuqala yezokuxhumana yase-Angola, i-Angosat-1… Ukuxhumana nomshini kulahlekile ngoDisemba 27, 2017
I-Oct29 06: 08